TRUESTORY: ချစ်သူများနေ့ နဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ (ဒီပုံတွေက မြန်မာနိုင်ငံစစ်စစ်က ပုံတွေပါ)
ကဲ.. ဒီပုံက အနောက်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်နော်..ရွှေမြန်မာပြည်မှာပါ..ဒီလို လူမြင်ကွင်းတွေမှာတောင် အရှက် သိက္ခာ မရှိကြတော့တဲ့မြန်မာပြည် လူငယ် တွေရဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့စိတ်တွေထဲ မှာ အရှက်မရှိ ၊ကိုယ့်ကျင့် တ၇ားတွေတဖြည်းဖြည်း အေ၇ာင်တွေ ဆိုးလာတာ ဘယ်ကစ သလဲ....?
အများပြည်သူ လူကြီးမိဘတွေ ရှိနေတဲ့ ဘတ်စ်စကားပေါ်လည်း နားမလည်တော့ဘူး..ဒါတွေဘယ် ကစလဲ
ဒီလို စရိုက်တွေ ၊တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ဒီလို လူ့ေ၇ပေါ်စီတွေက ကူးဆက်လာတယ်ဗျာ
ဒီလို ၀တ်ပြ သရုပ်ပျက်ပြတော့ အောက်လူငယ်တွေကလည်း
ငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့ အချိန်ှမှာ မဟုတ်တာတွေ လုပ်ပြ ၊၀တ်ပြတာကို ဒီလို ငယ်ရွယ်တဲ့ ညီမငယ်တွေ အတုခိုးမှားကုန်ကြပြီဒီလို အ၀တ်အစား ဖျက်စီးယုံတင် အားမရသေးဘူး..ကိုယ်ကျင့်တ၇ားပါ ဒီလိုထပ်ဖျက် စီးလိုက်ပြန်ပြီ
ကိုင်း..ဘာပြောကြမလဲ. လူငယ်တွေမှာ ရိုးသားတယ် ၊ဖြူစင်တယ် အဲ့ဒါကို ခုတုံးလုပ်ပြီ ကိုယ့်စီး ပွားေ၇း တခုထဲပဲကြည့်ပြီ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ၇င်ပြီးေ၇ာဆိုပြီ လူငယ်ထု ကို ချောက် ထဲဆွဲ ချ..မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပျက်စီးယုံတင် မ၇ဘူး..အဖော်ရှိအောင် လူငယ်တွေကို လမ်းမှားကို ပို့ ..လွတ် လပ်မှု ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီ..မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ ကို ချောက်ထဲ တွန်းချနေတဲ့သူတွေကို လူငယ်ထု က သတိကြီးစွာနဲ့မိမိတို့၇ဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်၊ ကိုယ်ကျင့်တ၇ားကို အေ၇ာင်မဆိုးခံ၇အောင် သတိထားကြဖို့ လိုပြီ...
ဘယ်တိုင်းပြည်တွေ ၊ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ ၊ဒါမြန်မာပြည် လွတ်လပ်ချင်တိုင်း လွတ်လပ်မယ်ဆို လူမျိုးယဥိကျေးမှုဆိုတာ ဘာမှရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး..လူဦးေ၇သန်းထောင်ချီရှိတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် ကြား မှာ နေ၇ပေမယ့် ကိုယ့်ရိုး၇ာယဉ်ကျေးမှု့ အတိုင်း ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုမှပုံတူ ကူးမချပဲ ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ရှေ့လူကြီးတွေကို စော်ကားတဲ့အပြုမှုတွေ၊ဖျက်စီးမယ့်သူတွေလာပြီ၊ ပေါ်ပြူ လာဖြစ်အောင် ဘယ်လို စတန့် ထွင်ထွင် ၊မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ ကို စော်ကားတဲ့ အပြုအမူကြော်ငြာ မျိုးကိုတော့ ဘယ်လောက်တိုး တက်နေပါစေ လုံးဝ (ခါးသီးစွာ) ကန့် ကွက်တယ်.. လူ့ေ၇ပေါ်စီ အသိုင်းအ၀ိုင်း လက်တဆုပ်စာက လုပ်တဲ့ ပုံ၇ိပ် မြန်မာပြည်တပြည်လုံးနဲ့ မလဲနိုင်ဘူး..အဲ့ကြောင့် လာမယ့် ချစ်သူများနေ့ မှာလုပ်မယ့် ရှိုးပွဲ ကို မြန်မာပြည်က ငါ့ညီ ၊ငါ့နှမများ လုံးဝ သွားေ၇ာက် အားမပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..အရှက် သိက္ခာရှိ တဲ့သူ မှန်သမျှ ဒီရှိုးပွဲကို ကန့် ကွက်ကြပါ ဆို့ ...ပထမကြော်ငြာထားတာ အခန်းပဲ မဲဖောက်ပေး မှာ..မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူတွေ က ၀ိုင်းဝန်းပြီကန့် ကွက်ကြတော့ ..ထပ်ပြီ စိန်ခေါ်ပြီ လုပ်လိုက်တာက ချောင်သာကို အပန်းဖြေ ညအိပ်ခ၇ီး.. လွတ်လပ်မှု ကို နိုင်ငံချစ်တဲ့သူတွေက အသက်တွေ ၇င်း ၊ထောင်ထဲ မှာ နှစ် ရှည်နေ၇ပြီ ၇င်းပေးထားတဲ့ မျက်နှာကိုမှ မထောက် လုပ်၇က်လေခြင်း..ဒီတခု သာ ခွင့်ပြုလိုက် လာမယ် ဆင့်ကဲ သရုပ်ပျက်တွေ လာမယ်..နောက်ဆို ရိုးပွဲမှာ ကွန်ဒုံး(အဖော်) ဝေတာတွေ ၊တားဆေး ဝေတာတွေလာမယ်..ဒီထက်ဆိုးလာမှက..ကိုယ်ဝန်၇လာ၇င် မလိုချင်၇င် အလကား ဖျက်ပေး မယ်ဆိုပြီ ကြောငြာတာတွေ လာတော့မယ်..ငါ့ညီ၊ငါ့ညီမများ..သတိကြီးစွာနဲ့မိမိတို့ရိုးသား ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံ၇ိပ်လေးကို အပျက်မခံဖို့ဒီ(အလင်းကမ္ဘာ)မှနေ၍ေ၇းသား လိုက်ပါ တယ်..ကျနော (စောနောင်)ေ၇း တဲ့စာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်...။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဒါထက် ဒီစာလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပေး၇င် ပိုပြီကျေးဇူးတင် တယ်ဗျာ..
ဒီပုံကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အမေစု တစ်ယောက် အင်္ဂလန်သားတွေ ပေါင်ပေါ် တက်ထိုက်နေတာပါ
မြန်မာပြည်၇ဲ့ ရိုးသားယဉ်ကျေးတဲ့ ပုံ၇ိပ်လေး မပျောက်ပျက်ဖို့ ဆုတောင်းရုံမှတပါး....လူငယ်များ.....?
Myanmar Express မှကူးယူဖော်ပြသည် ။
Posted by Gentle Men at 10:06 AM